संसारका सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति जेफ बेजोसले प्रेमिकाका भाइसँग मागे १९ करोड क्षतिपूर्ति!!! – News Nepali Dainik
संसारका सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति जेफ बेजोसले प्रेमिकाका भाइसँग मागे १९ करोड क्षतिपूर्ति!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ समय: १६:४४:४१
***अमेजनका मालिक जेफ बेजोसले प्रेमिकका भाइसँग जरिवानास्वरुप १.७ मिलियन डलर (१९ करोड रुपैयाँ) मागेका छन् । वास्तवमा बेजोसकी प्रेमिका लरेन सान्चेजका भाइ माइकल सेन्चेजले उनीमाथि मुद्दा दर्ता गरेका थिए । ****माइकलले मुद्दा हारेका थिए । यसै कारण अब बेजोसले माइकलसँग उनको कानूनी उपचारका लागि भएको खर्चको रकम चुकाउन माग गरेका छन् । वास्तवमा यी दुईबीचको विवाद सन् २०१९ मा सुरुवात भएको थियो । त्यतिबेला लरेन र बेजोस विवाहित थिए । तर दुबैको अफेयरको जानकारी ***नेशनल इन्क्वायरर र पेज सिक्स म्यागजिनलाई भएको थियो । म्यागजिनमा लरेन र बेजोसका केही नीजि मेसेज र फोटो पनि छापिएको थियो । म्यागजिनले यो पनि बताएको थियो कि उनीहरुसँग यी जोडीको यस्ता तस्बिर पनि छन् जुन छाप्न उचित हुने छैन । म्यागजिनमा रिपोर्ट छापिएको केही घण्टा अघि मात्रै बेजोसले आफ्नी श्रीमती म्याकेन्जीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
****पछि माइकल सेन्चेजले बेजोसले आफूमाथि उनीहरुको नग्न फोटो नेशनल इन्क्वायरर म्यागजिनलाई दिएको भनेर आरोप लगाएको बताए । माइकलले बेजोसले लगाएको आरोपका कारण आफ्नो मानहानी भएको पनि बताए । यद्यपि, प्रमाण पर्याप्त नभएका कारण न्यायाधिसले मुद्दा खारेज गरिदिए । यस्तै, बेजोसले अदालत सामू आफूले कहिले पनि माइकलमाथि फोटो सार्वजनिक गराएको आरोप नलगाएको बताएका थिए । *#*,ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार बेजोसले शुक्रबार माइकल सेन्चेजले आफ्नी बहिनी (उनकी प्रेमिका) लाई धोका दिएको बताएका छन् । बेजोसले माइकलले करिब २२ लाख रुपैयाँमा आफ्नो नीजि कुराकानी टेबलोइडलाई बेचेको आरोप लगाए ।
*#*#*यस्तै, माइकल सेन्चेजका वकिल टम वारेनले अर्बपतिको तर्फबाट गरिएको कानूनी उपचारको खर्च चुकाउनका लागि गरिएको अनुरोधलाई अश्लील र भद्दा बताएका छन् । यसअघि वारेनले जेफ बेजोसविरुद्ध मानहानीको मुद्दा हारेपछि माइकल सान्चेजले माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने इच्छा राखेका छन् ।
Last Updated on: January 27th, 2021 at 4:44 pm